I-Dubai Tourism Manje Imisa Izinto zayo ku-Generation Z
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Imfundo » I-Dubai Tourism Manje Imisa Izinto zayo ku-Generation Z
Isithombe sihlonishwa ngu-radler1999 wase-Pixabay
I-Emirate yaseDubai yethule umncintiswano onikezelwe kubafundi base-Italy ukusabalalisa ulwazi ngendawo yayo. “Uma wazi i-Dubai, maningi amathuba okuba uwavakashele mahhala” umlayezo kanye nenhloso yephrojekthi edalwe yi-Dubai Tourism Board (DTB).
I-DTB ikhethile uhlelo lokusebenza yesiqalo semfundo yase-Italy sokuxhumana okuqinile nabafundi basenyuvesi - iGeneration Z eyaziwa nangokuthi i-Gen Z noma i-Zoomers - ezobandakanyeka nsuku zonke ngemibuzo nemiklomelo. I-Gen Z yilabo abazalwa kusukela maphakathi kuya ngasekupheleni kwawo-1990 kuya ekuqaleni kwawo-2010.
Inhliziyo yephrojekthi ingumncintiswano osebenzayo kuhlelo lokusebenza kuze kube nguJanuwari 29, 2022.
Miningi imiklomelo esizoyithola, okuhlanganisa namathikithi endiza ye-Emirates angu-2 kwaba-2 ukuze bathole umlando, isiko, nezithombe zezakhiwo ezenze i-Dubai yaduma emhlabeni wonke.
Umqondo womncintiswano wemiklomelo usukela esifisweni sokuthuthukisa indawo ikakhulukazi phakathi kwesizukulwane sabafundi base-Italy abazokwazi ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuze bawine hhayi kuphela izindiza eziya e-Dubai kodwa nama-euro angu-1,600 njengekhadi lesipho.
I-Mechanics ilula: abahlanganyeli kuzodingeka baphendule imibuzo emi-5 nsuku zonke, abazoyithola kuhlelo lokusebenza, mayelana nomlando namasiko e-Dubai. Empendulweni ngayinye efanele, bayoba nethuba lokuwina umklomelo abafiselekayo ohlinzekwa yi-DTB.
I-Thefacultyapp ivumela abasebenzisi bayo ukuthi baphonsele inselelo emicabangweni efundwe esikoleni nasenyuvesi ukuze bathole izaphulelo ezinkampanini ezisebenzisana nabo abaqalayo, okuyisiteshi sokukhangisa sedijithali esivumela ithuba lokuhlangabezana ne-Generation Z futhi sibambisane ngempumelelo.
“Silandele zonke izici zokuhlela, ezingokomthetho kanye nezokuklama,” kuchaza uChristian Drammis, oyi-CEO ye-facultyapp, “ngenhloso yokudala ulwazi oluphelele noluhehayo lwabasebenzisi bethu, sibanikeze ithuba lokuvakashela indawo ecebile ngokwenza kahle kanye nokuhlinzeka I-DTB iyisixazululo esibandakanyayo, futhi ngesikhathi esifanayo esingajwayelekile, sokukhuluma ngeDubai nezinkulungwane zayo zamathuba. "
I-Tourism Seychelles Kick-Iqala Imisebenzi Yokukhangisa e-FITUR Spain
I-Thai Airlines Crisis Manje Ithola Umjovo Wemali Engu-$187 Million
Isinyathelo esisodwa sokusondela ekwelashweni okusha kwe-Cystic Fibrosis
Sibungaza Ukuthuthukiswa Kwabesifazane Kwezokuvakasha Nezokuvakasha
I-Jamaica neCuba Bayaqhubeka Nezingxoxo Zokuqinisa Ezokuvakasha...
I-Jean-Michel Cousteau Resort Fiji Ithuthukisa Indawo yokudlela Yezivakashi...
I-Ukraine International Airlines ikhipha amaNdiya...
I-Ethiopian Airlines iqala kabusha i-Addis Ababa yayo ...
ILufthansa Group ilindele ukuqopha umlando ehlobo lamaholide...
Isidingo Sezindawo Zokudla kanye Nezisebenzi Zokudla Sikhuphuka Njengemaski...
Imithi Entsha Ethembisayo Yokwelapha Umdlavuza Webele
Ufuna ukufunda phesheya? Amazwe ayi-10 aphezulu kwezemfundo...
Indiza engami isuka e-Honolulu iya e-Auckland ngesiHawaii...
Ukutubeka kodokotela kucishe kuphindeke kabili ngesikhathi se-COVID
Imaski Entsha Yesikhumba Ephefumulelwe Ikhofi
I-IMEX Frankfurt: Wonke Umuntu Umenywe Ukubumba Lokhu...
ILondon iwina isicelo sokusingatha i-2023 Ecocity World Summit
Abafundi Bezokuvakasha Bakha i-New Metaverse
Imakethe Yezisetshenziswa Zezimayini Zangaphansi Enokuthengiswa Okukhulayo...
Ukuhlasela kweRussia e-Ukraine kuphazamise iMpumalanga...
I-Montreal inweba isimo esiphuthumayo se-COVID-19 izikhathi ezinhlanu ...
Isivuno Sembewu Yamagilebhisi Emakethe Yesicelo Sokudla Kwezilwane...
IRussia ivimbele uNdunankulu waseJapan ukuthi angene...